I-Cabanatuan Studio 201-iWiFi ekhawulezayo yamahala - I-Airbnb
I-Cabanatuan Studio 201-iWiFi ekhawulezayo yamahala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGreg
I-intanethi ye-wifi ekhawulezayo yasimahla kunye nemizuzu eli-10 yokuhamba ukuya eSM Mall Cabanatuan. Indawo esembindini elungele uhola wendlela... kufutshane neeMall, izibhedlele, iHolo yesiXeko, iHolo yezoBulungisa kunye nezokutyela. Igayidi yasimahla phantsi kwegaraji yokupaka.
Isitudiyo esilula esicocekileyo esikwisakhiwo esikhuselekileyo sosapho, kumgama nje oziimitha ezingama-30 ukusuka kuhola welizwe waseMaharlika. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi beshishini kunye nabahambi ngobusuku. Umbindi weLuzon, ulungile kakhulu kuhambo oluphakathi. I-TV, i-aircon, ifriji kunye nekhitshi epheleleyo.
Isitudiyo esilula esicocekileyo esine-airconditioned esine-airconditioned enokurenta kumgangatho wesibini wesi sakhiwo sikhuselekileyo sekhondom esinesango lokungena. Kukhuselekile kwaye kukhuselekile kwaye umgangatho ophantsi uhlala utata. I-balcony enkulu yophahla lwe-4th ibonelela ngembono ye-Cabanatuan kunye nodederhu lweentaba ukuya empuma.
Indawo ephithizelayo nephithizelayo ye-barangay nje i-30meters ukusuka kuhola welizwe kwaye ngaphantsi kwekhilomitha ukuya kwi-SM mall...eyesibini ngobukhulu ngaphandle kweManila. Indawo ineevenkile ezikufutshane kunye neevenkile zokutya ezisanda kuphekwa.
Utata wam osele esidla umhlala-phantsi nguye olawula le ndawo kwaye uhlala kumgangatho ophantsi. Unobubele kwaye uluncedo unokunikela icebiso xa kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cabanatuan City